Uvavanyo lwempembelelo zoomatshini - iYuyao Jera Line Fitting Co, Ltd.
Uvavanyo lwempembelelo zoomatshini (IMIT) olubizwa ngokuba luvavanyo lomatshini, injongo yolu vavanyo kukuqinisekisa ukuba ngaba iipropathi zemveliso ziya kutshintshwa xa imveliso iphantsi kothotho lwempembelelo kumaqondo obushushu aqhelekileyo. Ngolu vavanyo sinokuvavanya ukuzinza kwemveliso yethu ngexesha lothutho okanye lofakelo.
Jera preforms kuvavanyo kwiimveliso ezingezantsi
-FTTH intambo yamasango
-Ukucheba okuphantsi, okuphakathi kunye nokuphakama kwevolthi yentloko.
-Ibhokisi yokuphelisa i-optic optic, iziseko
-Ifiber yokuvalwa kwe-splice ebonakalayo
Uvavanyo lwempembelelo lwenzeka kwangoko kwaye luyonakalisa, umonakalo akufuneki wenzeke ukuze uchaphazele ukusebenza ngokuchanekileyo kwemveliso phantsi kobushushu obuqala. Iindibano zeMveliso zinokubekwa phantsi kovavanyo lwezixhobo kunye novavanyo lwempembelelo ukusuka phezulu nasecaleni, ngendawo yentsimbi kunye nesisele sobunzima obahlukeneyo, ubunzima beCylindrical buwela ngokukhululekileyo kumgama obonisiweyo kunye nokufaka imveliso kuvavanyo.
Umgangatho wethu wovavanyo ngokweCENELEC, EN50483-4: 2009, NFC 33-020, DL / T 1190-2012 yezixhobo zokuhambisa umbane, kunye ne-IEC 61284 yekhebula le-fiber optic, kunye nezinye izinto. Sisebenzisa ukulandela imigangatho yovavanyo kwiimveliso ezintsha ngaphambi kokumiliselwa, kunye nolawulo lwekhwalithi yemihla ngemihla, ukuqinisekisa ukuba abathengi bethu banokufumana iimveliso ezihlangabezana neemfuno zomgangatho.